12 Iindlela zokuHamba eziKhulu eziKhulu ukunqanda umhlaba wonke | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iindawo ezinika umdla Tips > 12 Iindlela zokuHamba eziKhulu eziKhulu ukunqanda umhlaba wonke
Ihlabathi yindawo entle, kodwa abahambi okokuqala bangawela kwimigibe yokhenketho kwaye babe ngamaxhoba obuqhetseba bokuhamba. Yiyo leyo 12 Olona hlaselo lukhulu lokuhamba ukunqanda umhlaba wonke; ukusuka eYurophu ukuya eTshayina, nakwezinye iindawo.
1. Ukuhamba ngobuqhetseba ukunqanda umhlaba wonke: Ukutsha ngaphezulu kweTeksi-Ukujika
Ukugcwala kwabantu, umqhubi weteksi ukuxelela iindaba zedolophu, kwaye izimvo ezintsha ezivela ngefestile zenza kube lula kakhulu ukuwela kubuqhetseba bokuhamba kweeteksi ngaphezulu.
Ukuhamba-hamba ngeteksi kubonakala ngathi lolona hambo luhle njengokhenketho, kodwa inokuba yenye yezona zinto zibalaseleyo zokuhamba emhlabeni. Njengokhenketho ngekhe uyazi eyona ndlela ikhawulezayo neyona ilungileyo ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya ehotele, okanye ukusuka komnye umtsalane ukuya komnye, ke abaqhubi beeteksi banokubhiyozela egameni lakho kwaye bacele isantya esibi okanye bakuse kuhambo olukhulu, uhambo olungafanele luhlale ngaphezulu kwe 15 me.
Ungakuphepha Njani ukugqithisa iTeksi?
Phanda kwangaphambili ngenqanaba leeteksi elamkelweyo kwi ukuhamba kuyo. Ngaphezu, Qiniseka ukuba uneapp yemephu enkulu, ayifuni i-Wi-Fi, ukuze ujonge indlela ngawo onke amaxesha, kwaye okubaluleke kakhulu, khetha inkampani ethembekileyo yeeteksi, okanye uhambo ngololiwe.
2. Ukuchitheka kweengubo zakho- ubuqhetseba behobe
Ukuba uceba ukuya eArgentina, umzekelo, Kuya kufuneka ukuba uqaphele ukupheliswa kwehobe kwiimpahla zakho zokuhamba ngobuqhetseba. Olu hlobo lwenkohliso yokuhamba luthandwa kakhulu eBuenos Aires, xa kufika indawo enobuntu yasekuhlaleni, ukufuna ukunceda kuba kuchitheke yonke impahla yakho.
Khawufane ucinge xa ​​unomdla kumbindi wesixeko okanye ubenosuku oluhle epakini, ebhekabheka, ngequbuliso kuthi gqi umntu ongamaziyo onobuhlobo, ukukwazisa ukuba kukho ukuchitheka kuyo yonke impahla yakho. Ubeke ibhegi emhlabeni, jonga ujonge ukumangaliswa kukuchitheka kwalo, kwaye okwangoku incwadana yokundwendwela, isipaji, kwaye zonke izinto zakho zexabiso zimkile.
Ungakuphepha Njani Ukuchitheka Kwimpahla yokuHamba ngobuqhetseba?
Jonga njengendawo ekuyo, yazi iindawo ezikungqongileyo, kwaye uzame ukubeka amehlo akho phambili.
3. Ukuhamba ngobuqhetseba ukunqanda umhlaba wonke: Umkhonyovu weATM wokuHamba
Imali yenza umhlaba ujikeleze, ke ngokucacileyo enye yezona zinto zibalulekileyo zohambo ehlabathini kubandakanya imali. Olunye lolona hlaselo lukhulu lokuhamba emhlabeni kukukhwabanisa kweATM xa umfundi wekhadi letyala asuswayo ekopa iziqinisekiso zakho emva koko wazisebenzisa ukucoca yonke imali eseleyo.
Ungawuphepha njani umkhonyovu weATM?
Ukuba kunyanzelekile, zoba imali kwibhanki enkulu yeATM. in Iibhanki ezinkulu eYurophu, kukho ukhuseleko, ke amathuba okufikelela kwabafundi bekhadi le-ATM asondele ku-zero.
4. Bump Kwaye Bamba
Olunye lolwaphulo-mthetho lokuhamba oluqhelekileyo emhlabeni, i-bump kunye ne-grab ziyathandwa kwi Ukuhanjiwa kawonke-wonke, nakwiimpawu zomhlaba. Kungenzeka ukuba uloliwe, metro, okanye ulinde kwisikwere sasePrague iwotshi edumileyo xa ngequbuliso umntu ethe gqi kuwe ngengozi.
Ngelixa inokuba yingozi, kunokwenzeka ngakumbi ukuba ibe kukucwangciswa kokuqokelela izinto ngaphakathi. Inokwahlulahlula umzuzwana, a “uxolo”, nesipaji sakho, jonga, okanye ubucwebe buphelile. I-bump kunye ne-scam scam yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzazi ukuba nini babehamba eYurophu.
Ungayinqanda njani i-Bump kunye neGrab?
Shiya izinto ezixabisekileyo kwigumbi lasehotele, kwaye usasaze yonke into ohamba nayo: isipaji epokothweni yebhatyi yangaphakathi umzekelo.
5. Ukuhamba ngobuqhetseba ukunqanda umhlaba wonke: Umkhosi
Kuyafana kwiqhuma kunye nokubamba, ubuqhetseba obuninzi, kuxa ngesiquphe ugcwele liqela labantu ongabaziyo, Kakuhle okujongeka kungabaziyo kuwe. Inyaniso, aba bantu bangaziwayo bayazana kakuhle, Kwaye kucwangciswe kakuhle ukudibana okungaqhelekanga, okanye ibubu. Ngale ndlela ijongeka imsulwa ngokupheleleyo, ngelixa ujikelezwe kwaye ukhethwe.
Oku kudla ngokwenzeka kwindawo enabantu abaninzi, apho eli qela lihlangana nesihlwele kunye nesiphithiphithi. Baqala ukuhamba-hamba ecaleni kwakho kwaye bakuphazamise njengoko abanye bebamba yonke into. Ukugcina imali yakho kwindawo enye yenye 10 Iimpazamo zokuhamba kufuneka uziphephe eYurophu.
Ungasiphepha njani isiQhushumbisi?
Gcina nje kude nesihlwele, kwaye uziphu idyasi yakho, okanye ubeke iliso kwizinto zakho, kukhethwa, beka nayiphi na ibhegi phambi kwakho.
6. Indawo yobuhlobo
Umntu onobuhle nonobuhlobo ngumkhwa odumileyo wokuhambahamba emhlabeni. Nokuba uhamba kwiRed Square okanye eParis, Kuza kuhlala kukho indawo enobuntu enikezela ngoncedo lwabo ukufikelela kwi-Eiffel Tower okanye bakubonise ixesha elifanelekileyo edolophini.
Ngaphezu, baya kuba luncedo kakhulu ekuboniseni zonke iiklabhu ezinkulu ezijikeleze, ukuba uya kukhwabanisa ngentsasa elandelayo, ukuvuka, kwaye ukuqaphela imali yakho yonke ihambile. Ngaloo ndlela, uhambo olulodwa umzekelo, kwihlabathi liphela kunokuba lithuba elingaqhelekanga lokudibana nabantu bendawo, kodwa inokujika ibe lelona phupha lakho libi.
Ungawuthintela njani uMkhonyovu wokuHamba weNgingqi?
Ukudibana kwabahlali kukhenketho lwakho kuyinto entle, kwaye lelinye lamava amahle. kunjalo, lumka ukuba ngubani omthembileyo, kwaye sichithe ubusuku kunye. I-adventure kwilizwe elingaqhelekanga linokujika ngokukhawuleza libe yintlekele, ke lumka.
7. Ukuhamba ngobuqhetseba ukunqanda umhlaba wonke: Ubuqhetseba besongo
free izikhumbuzo ezivela kwilizwe langaphandle isandi esimangalisayo, kodwa akukho zinto zisimahla kwilizwe esiphila kulo. ngoko ke, musa ukuwela kwisikrelemnqa sesaphulelo samahhala esihlala sibandakanya umfazi wasekhaya osondela kuwe encumile, ukubeka isongo esihlahleni sakho.
Uncumo kwaye unobungane, baya kukunika izacholo zokwenyani okanye izacholo zomqala zokugoduka nazo, Ngelixa lonke ixesha esinye isandla sifikelela kwisipaji sakho, nezacholo. Ukunikezela ngento entle nesimahla kukuphazamiseka okukhulu kwaye kusebenza kubakhenkethi abaninzi abamsulwa.
Ungasiphepha njani ubuqhetseba besongo?
Musa ukuwa njengezikhumbuzo zasimahla, kwaye gcina amehlo akho evulekile, kwaye ngobubele wala ukwamkela nayiphi na iminikelo yasimahla evela kubantu ongabaziyo.
8. Umntwana oQalayo
Ndinxibe iimpahla ezilusizi, emdaka, ukucela imali okanye ukutya, Umntwana ocelayo ungomnye wobuqhetseba bokuhamba emhlabeni obubuhlungu. Ukusuka eYurophu ukuya eTshayina, kukho abantwana abame ecaleni kwendlela, Ukucula idola kwizikwere, okanye ucofe iifestile zetaxi.
Rhoqo aba bantwana abalahlekanga njengoko bejongeka, kodwa bathunyelwa ukuba badlale indima. Ngokucacileyo, kukho abantwana abakudinga ngokwenene ukutya noncedo.
Ungawuphepha njani umkhonyovu wokucela umntwana?
Oku kuyinkohliso kuba umhlaba uzele ngabantwana abahluphekileyo abangenayo enye indlela ngaphandle kokungqiba. kunjalo, unganikezela ngokubathengela ukutya okanye uncede ngenye indlela, kunokuba unike imali. Le ndlela, ungajonga indlela abasabela ngayo, kwaye ukuba baswele ngokwenene okanye emva nje kwesipaji sabakhenkethi.
9. Ukuhamba ngobuqhetseba ukunqanda umhlaba wonke: Umtsalane Uvaliwe
Ukhangele iiyure zokuvula kwangaphambili, kodwa wothuka xa ufika etempileni okanye uthenga ivenkile umntu wasekuhlaleni ukuxelela ukuba kuvaliwe. ke, xa bekubona ukuphoxeka kwakho, Bathembisa ukukusa kwenye indawo ephawulweyo okanye Ivenkile, bhetele nangaphezulu kokuvaliweyo.
Abantu bendawo banokunika umdla omangalisayo, kodwa eneneni bayakukrazula, Ngokucela imali ebizwayo yokungena, okanye kukusa ezivenkileni apho bafumana ikhomishini yamafutha.
Ungasiphepha Njani Esi Sigqeba Sokuhamba?
Ukutyelela iindawo ezingaphandle kwendlela iyamangalisa, Qiniseka ukuba ujonga indawo engqongileyo kwaye ukuba kukho ezinye iindlela. Ukwengeza, uphando kwangaphambili ngezinto ezinomtsalane onokuzityelela eYurophu. Ukuba umtsalane ukhululekile, ke akukho sizathu sokuyifaka endaweni yexabiso elingaphezulu, kwaye iyafana nakwiivenkile ezinophononongo olukhulu.
10. Makhe ndithathe umfanekiso wakho
Ukuhamba wedwa kunokuba kuhle, kwaye ngamanye amaxesha ugcwele ukuzisola akukho mntu nawe oza kwenza umfanekiso wemidiya yoluntu ogqibeleleyo. IBig Ben okanye iFirenze ngasemva, Ujonga ngeenxa zonke kwaye emva koko beza kuwe bezisa ukuthatha umfanekiso omangalisayo, ukusuka kwikona enkulu.
2 Imizuzwana kamva ikhamera yakho kunye nayo yonke imifanekiso emihle ihambile, kuba umfokazi othandekayo ubalekile kunye nabo. Oku kunokwenzeka naphi na emhlabeni, kuye nakubani na, kuba zeziphi iingxaki eziza kwenzeka? kodwa iyenzeka.
Khangela abanye abakhenkethi, mhlawumbi abahamba bodwa ngokunjalo, okanye izibini ezitshatileyo. Le yeyona ndlela ikhuselekileyo yokufumana umfanekiso ogqibeleleyo kunye nokugcina ikhamera, kwaye ngokutshintshiselana, cela ukuthatha umfanekiso wabo.
11. Ukuhamba ngobuqhetseba ukunqanda umhlaba wonke: I-Switcheroo
Eyona ndlela yokuphatha imali xa usendleleni kukuba namatyala amancinci nawe ngalo lonke ixesha. kungenjalo, lumka ngeemali ezinkulu, xa uhlawula abaqhubi beeteksi okanye kwiindawo zokutyela zalapha. Unokuba unika ityala elikhulu ngentlawulo encinci, kodwa abafumanayo baya kuzenza ngathi bayaphosa ibhili enkulu kwaye bayitshintshe ngebhili encinci kakhulu. Le ndlela, batshintshisa abakhenkethi.
Abahlawuli bemali, abaqhubi beeteksi, okanye abalungiseleli, banokuba ngabadlali kolu hlaselo lwe-switcheroo. Uya kuba yilahleko enkulu apha, ukuba akalumkanga.
Ungasiphepha njani iSpamcheroo Scam?
Chaza isixa semali esayilwayo osinikayo, kwaye ulwazi utshintsho ekufuneka ulufumene.
12. Iindlela zokuHamba eziKhulu eziKhulu ukunqanda umhlaba wonke: Abafundi beNgesi abanomdla
Bathetha isiNgesi esaphukileyo kodwa bayakucela ukuba ubafundise. Abafundi baseNgilani abanomdla bazimele kwiikhefi nakwiindawo zentselo, ndiza kuqala incoko yobuhlobo nawe, emva koko ndikubuze isifundo sangasese sesiNgesi kwigumbi lakho lehotele.
Kanye ehotele, umfundi onomdla wesiNgesi unokujika abe yindawo yokulala ebusuku, kwaye uvuka kwisipaji kunye nepaspoti ebiweyo. Inyaniso ayinakwenzeka ukuphucula ubuchule bolwimi ngobusuku obunye, Kwaye nomntu othile ufuna ukuziqhelanisa nesiNgesi, esi sifundo akufuneki senzeke kwigumbi lehotele okanye ngaphezulu kotywala.
Ukuququmbela, Ukuhamba ngobulumko yeyona ndlela yokuhamba kwezi ntsuku, naphi na emhlabeni. Isizathu kukuba ubuqhetseba bokuhamba buye banzima ngakumbi ukuveza. Oko kuyithethwayo, akukaze kube lula ukuhamba-hamba kwihlabathi jikelele kunanamhlanje.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise iiNdawo zakho eziMnandi zokundwendwela kwaye ugqibezele uhambo lwakho ngolonwabo ngokuphepha ubuqhetseba bokuHamba.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iindlela ezili-12 zokuHamba eziKhulu zokuKhusela uMhlaba wonke" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Ftravel-scams-avoid-worldwide%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
icyocline IiNdawo eziMkhulu zoKhenkethoUkuKhusela kwihlabathi liphela Siskemu UkhenkethoTraps ZeSisa traveltips